> Resource> Free> Top 5 Best Free MOV Video egbutusị
Ntoputa nke multimedia nkà na ụzụ na ya na-achọ atụmatụ mere onye ọrụ na-eche banyere ndị kasị mma video egbutusị dabeere na MOV video usoro. Ịchọta ịtụnanya video cutter bụ nnọọ ihe a aka ọrụ na otu onye nwere ike nweta dị ịrịba ama ịma aka site nnọọ availing ụfọdụ n'ime free MOV video egbutusị. Otú ọ dị, e nwere nọmba nke video egbutusị ji ọtụtụ puku ndị mmadụ kwa ụbọchị na ọ bụ nnọọ ihe siri ike warara ala ndepụta nke MOV video egbutusị n'ime nanị n'elu 5 video egbutusị; ma ụfọdụ n'ime ha na-nyere n'okpuru:
Mara mma Video cutter
Avidemux na-adịghị eje ozi dị ka a video cutter ma ọ na-eji na dị ka a video joiner; ọ bụ fechaa na mma n'anya ịba uru atụmatụ enyere ndị ọrụ na-mfe họrọ a òkè ọ bụla na video, bee ya na nwere ike ịzọpụta ya ẹdude faịlụ ma ọ bụ ọhụrụ faịlụ dị ka mma.
Mfe na-eji interface;
Bara uru presets nke nkịtị mmepụta aga-eme.
Arụmọrụ bụghị nnọọ na-eju afọ.
Free video cutter bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama video cutter ngwaọrụ ndị na-enyere ndị ọrụ wepụ ma ọ bụ ewepụtụ kpọmkwem akụkụ nke ọ bụla video. The faịlụ nwere ike a ga-azọpụta ndị dị iche iche ma ọ bụ otu usoro. Free video cutter nkwado dị iche iche video formats gụnyere MOV, M4V, AVI, WMV na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na e dere otu egosipụta window tinyere preview nhọrọ.
Na-akwado multiple video formats;
Otutu mmepụta format nhọrọ.
Enwereghị na ụda àgwà;
Ole na ole ụda ntọala.
Kewara nnukwu MOV faịlụ n'ime nta video faịlụ a mere mfe site n'iji Video toolbox. Nke a bụ ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ enyi na enyi online video nchịkọta akụkọ na-enye ohere ọrụ bee, ifiọk na-egwu video; ọ metụtara àgwà nke mbụ vide faịlụ na mara mma akpan akpan akụkụ nke onye ọrụ kpọmkwem chọrọ ewepụtụ ma ọ bụ wepụ si ụdị nnukwu video faịlụ.
Mara mma video cutter bụ a n'ụzọ kwụ ọtọ ngwọta mgbe onye ọrụ dị mkpa nke ịcha ma ọ bụ wepụ otu nke si video faịlụ; ọ na-akwado dị iche iche video formats gụnyere AVI, MOV, FLV, WMV na ndị ọzọ. Ọ nwere ọrụ enyi na enyi interface na-adịghị chọrọ ọ bụla ọzọ ihe ọmụma iji dezie na bee video.
Ọ dịghị mkpa ka ịchọ ihe wụnye ọ bụla ọzọ codec;
Easy ọrụ interface.
Ọ dịghị audio cues.
VSDC Free Video Editor bụ a free ma àgwà video nchịkọta akụkọ nke na-abịa na dịgasị iche iche nke atụmatụ. Ọ na-akwado iche iche nke videos dị ka MKV, Flv, mpg, MP4, WMV, VOB, DAT, AVI, DivX ,, MOV, wdg .. na ya, ịcha na kewara MOV videos nwere ike ịbụ mfe.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ ndị ọkachamara MOV video cutter, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ukwuu tụrụ aro. The ike video ọnwụ ọrụ enye gị ohere mfe bee video faịlụ n'ime dị iche iche akwụkwọ ya. E wezụga nke ahụ, wuru na-idaha nchọpụta ọrụ nwere ike mfe bee video ọbụna ihe kpọmkwem.